Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Donyell Malen Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Akụkọ ndụ anyị nke Donyell Malen na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / nwunye ka ọ dịrị, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-egosipụta akụkọ ihe mere eme nke ndị Dutch ọkachamara na-agba ama nke Wieringen. Akụkọ anyị malitere site na mgbe ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Donyell Malen's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Donyell Malen.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike dribbling ya na ụdị ebumnuche dị oke egwu. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle Donyell Malen's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Donyell Malen nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Donyell Malen mụrụ na ụbọchị 19 nke Jenụwarị 1999 na Wieringen na Netherlands. A mụrụ ya nke njikọ dị n'etiti nne ya, Mariska Manshanden na nna ya, Robert Malen.
Onye Dutch nke agbụrụ agbụrụ na agbụrụ Surinamese zụlitere na ebe amụrụ ya n'obodo nta Wieringen na North Holland, Netherlands ebe ọ tolitere na-enweghị ụmụnne nwoke na ụmụ nwanyị.
Donyell Malen toro na Wieringen na North Holland, Netherlands.
O toro na Wieringen, Malen dị obere bụ nwa nwoke gbara ọchịchịrị nke gbapụrụ iche n'obodo ọcha n'ihi ikike ya dị ka ọmụmụ oge ịkewa n'egwuregwu asọmpi VV Succes mgbe ọ dị naanị afọ anọ.
Donyell Malen Mmụta na Ọrụ Buildup:
Ka ọ na-erule oge Malen dị afọ 5 na 2004, ọ malitere ịrụsi ọrụ ike na HVV Hollandia ebe ọ nọrọ ihe na-erughị afọ 3 ịmụ nka ọhụrụ.
Ụmụ Arjen Robben Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Agbanwe
Mgbe Malen nọ na ya, etinyere ya aka ka ọ bụrụ onye isi na otu ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ dị elu na otu ndị otu Dutch National.
Foto tụbara nke Donyell Malen dị afọ 8 yi uwe ndị otu egwuregwu.
Ka afọ na-aga, ndụ Malen fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gburugburu football. N'ihi ya, ọ "gbawara" iji nweta ndụ mmekọrịta bara ụba na mpụga egwuregwu ahụ ebe ime ụlọ ya n'ụlọ mere ka ọ banye n'egwuregwu bọọlụ dịka akwụkwọ mma nke nwata na onye ndụmọdụ ya masịrị ya. Ronaldinho.
Donyell Malen Childhood Akụkọ - Ndụ Mmalite Ndụ:
N'oge na-adịghị anya tupu a nabata Malen dị afọ 9 na usoro ndị ntorobịa nke Ajax ebe ọ nọrọ oge (ihe dị ka afọ 8) nke ntorobịa ya na-etinye azụmaahịa ya dị ka ezigbo onye ọgụ.
Donyell Malen (nke mbụ site n'aka nri) na usoro ndị ntorobịa nke Ajax na 2011. Can nwere ike ịhụ Matthijs De Ligt na Justin Kluivert?
Ọ bụ ezie na njikwa nke B-junior nwere ọgụgụ isi nke Ajax ka na-emebeghị ka ọ mara atụmatụ ya na Donyell, Arsenal bịara na-achọgharị ihe omume egwuregwu bọọlụ na onyinye dị ụtọ nke gụnyere ntinye akwụkwọ.
Donyell Malen Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Arsenal mere nke ọma na nkwekọrịta ha na Donyell gụnyere ime ka ọ pụta ìhè n'ọtụtụ egwuregwu nke Premier League nke ndị ntorobịa nke mere ka ọ pụta ìhè na mpụta izizi ya maka ndị otu egwuregwu klọb n'oge The Gunners 2-0 meriri Sydney FC na July 2017.
Ka otu ọnwa gachara, Arsenal mere ngwa ngwa resị Malen na PSV Eindhoven ka ndị bekee kwenyere na onye dị afọ iri abụọ ahụ enwebeghị ọganihu zuru oke n'oge ọnwa 20 ya.
Ozi banyere esemokwu "hapụ-aga" kelere mkpu nke ndị Fans kọwara ya 'Nke ka njọ karịa ịfu Alexis Sanchez'.
Arsenal hapụrụ Donyell Malen n'ihi na ọ masịghị ndị ntorobịa Bekee.
Donyell Malen Bio - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ nke Ọma:
N'ịga n'ihu na ọrụ ya na PSV II, Malen nwere ọganihu na mmali na oke nke hụrụ ya ka a kpọọ aha ya kacha mma nke 2017-18 Jupiler League.
Ọ gara n'ihu mee PSV mbụ ya na mmeri 4-0 Eredivisie na PEC na February 2018 wee merie aha 2018 Eredivisie na PSV n'afọ ahụ.
Donyell Malen meriri Eredivisie na PSV na 2018.
Ngwa ngwa ngwa n'oge ederede, Malen bụ otu n'ime ebumnuche ebumnuche kachasị na mgbaru ọsọ na dutch League bụ nke ndị otu egwuregwu dị elu gụnyere Liverpool FC na ndị gara aga bọọlụ bụbu ndị ọzọ chọrọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme. .
Banyere Delisha, enyi nwanyị Donyell Malen na nwunye ya ịbụ:
Enwere aha ole na ole na-eme Malen ọchị mgbe akpọtụrụ ya nke kachasị nke enyi nwanyị ya - Delisha. Kedu ihe anyị maara banyere ọkara kachasị mma n'oge edere?
Iji malite, ọ bụ nwa nwanyị na-ahụ n'anya nke na-ahụ n'anya njem na iri ezigbo nri. Na mgbakwunye, ọ hụrụ n'anya nke ukwuu igbochi ndụ nke onwe ya pụọ ​​n'anya ndị nta akụkọ.
Donyell Malen na enyi ya nwanyị mara mma Delisha.
Agbanyeghi na amaghi otutu ihe banyere mgbe lovebirds zutere wee bido, a na-ahuta ha dika ndi di na nwunye zuru oke nke choro ije ije nke ukwu tupu ha nabata nwa nwoke na nwa ha nwoke iketa na ihunanya ha.
Ndụ Donyell Malen Ezinụlọ:
Ezinụlọ bụ ebe ndụ malitere n'ezie nye Malen ebe ịhụnanya adịghị akwụsị n'ebe ọ nọ. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nna Donyell Malen: Robert Malen bụ nna Donyell Malen. Ọ gbara bọọlụ maka ndị ntorobịa Surinamese n'oge ndụ Malen.
Robert kewapụrụ onwe ya na nne Malen obere oge ma agbanyeghị na ya na nwa ya nwoke ama ama nwere mmekọrịta chiri anya nke were ya dị ka nna nna.
Banyere nne Donyell Malen: Mariska Manshanden bụ nne Donyell Malen. Ọ rụrụ ọrụ dị mkpa na ndụ na ịrị elu nke nwa ya nwoke site n'ịkụga ya ọzụzụ na-erughị oge 3 kwa izu.
Na mgbakwunye, ọ kwagara London iji mee ka ya na ya nọrọ ma n'ezie, mere ka ọ bụrụ ọrụ iji mee ka Malen nwee obi ụtọ n'akụkụ oche nna ya bụ Robert.
Donyell Malen na nne ya Mariska Manshanden.
Banyere ụmụnne Donyell Malen: Malen bụ nwa nwoke nwoke amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne ya na nna ya. N'ihi ya, ọ nweghị ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị ndị sitere n'ọmụmụ kama ụmụnne amachaghị amụrụ nna ya site na mmekọrịta ọzọ.
Banyere ndị ikwu Donyell Malen: Ewezuga ezi ezinụlọ nke Malen, o nwere nna nna na nne nne akpọrọ Joop na Marian n'otu n'otu ebe enweghị ndekọ nke nwanne nna ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya n'oge edere.
Foto castback nke Donyell Malen na nna nna ya na Camp Nou.
Donyell Malen Ndụ Nke Onwe:
Ikwu okwu banyere ụdị onye Doyell Malen nwere, ọ nwere ụdị mmadụ dị ịtụnanya nke na-egosipụta mmụọ dị jụụ ma dịkwa egwu nke ndị mmadụ nwere akara Capricorn Zodiac. Ọ nwere obi ike, nhazi, ọgụgụ isi na ịrụsi ọrụ ike n'okpukpe.
Onye na-egwuri egwu nke na-anaghị ekpughe nkọwa gbasara ndụ ya na nke onwe ya nwere obere mmasị na ihe omume ntụrụndụ ndị gụnyere igwu mmiri, ikiri telivishọn, ịkụ azụ na ịnọnyere ndị enyi na ezinụlọ.
Donyell Malen azụ maka oge ezumike.
Eziokwu nke Donyell Malen:
You maara na ọnụ ahịa Donyell Malen ka na-enyocha n'oge edere? N'agbanyeghị nke ahụ, ọ nwere uru ahịa nke € 18 nde nwere ụgwọ ọrụ kwa afọ na-enye ezigbo ego nke yiri ka ọ na-arị elu site na afọ.
N'ihi nke a, talent na-ebi ndụ okomoko n'ụlọ ya Eindhoven ebe ya na enyi ya nwanyị bi. Na mgbakwunye, ọ na-anya ụgbọ ala mara mma ma na-eme atụmatụ inwe ụlọ nke ya n'ọdịnihu dị nso.
Donyell Malen na-abịaru nso ụgbọ ala ya dị mma.
Donyell Malen Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie akụkọ nwata anyị na Donyell Malen, lee akụkọ dị ala karịa ị mara ma ọ bụ eziokwu ị na-anụbeghị banyere ya.
Smụ sịga na Mmanya: Enyeghị Donyell Malen ị takingụ ihe ọ hardụ hardụ na-aba n'anya, ahụbeghịkwa ya ka ọ na-a smokingụ sịga n'oge edere ya. Site n'inwe ezi ahụike dị otú ahụ, Malen na-esonye na ndị egwuregwu bọọlụ na-ewere ahụike ha dị mkpa ma ghara ime ihe ọ bụla iji mebie ya.
Ogbugbu: Malen enweghị nkà eji eme ihe n'oge a na-ede ya, ndị na-egwu egwu enweghịkwa banyere ya. Ọ na-elekwasị anya n'ịmezi ahụ ike ya, ume ya na ikekwe iji nweta ụgbọ elu.
Ahụ Donyell Malen enweghị egbugbu n'oge a na-ede ihe.
Religion: O doro anya na onye na-egwuri egwu abụghị nnukwu ihe na okpukpe ma ọ nyebeghị nkọwapụta doro anya na nkwenkwe ya. N'ihi ya, enweghị ike ikwupụta ya n'ụzọ edere ma ọ bụ onye Kraịst, onye Alakụba ma ọ bụ onye ekweghị na Chineke.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Storymụaka Nwa Donyell Malen yana Ihe Ntanaka Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.